रमाइलो - Forseenetwork : Nepalko entertainment web site : nepali cinema & Gossip : nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : nepali art ,music , manoranjan & more
२०१६ मा भाईरल भएका ९ तस्वीर, तरकारीवाली देखि खुर्सानीवालीसम्म
कहिलेकाही सामाजिक सञ्जालले मानिसको जीवन बनाईदिन्छ भने कहिले काही बिगारी पनि दिन्छ । तर यो वर्ष केही आम मानिसको जीवन सामाजिक सञ्जालले बनाईदिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । यो व..
पचास लाख पाएकी सुजाताको सामाजिक सञ्जालमा यो हाल छ
नेपाल सरकारले कंगे्रश नेत्री सुजाता कोइरालालाई उपचारको लागि पचास लाख दिने भएपछि उनको र नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जालमा चर्को अलोचना भईरहेको छ । सरकार र सुजाता मिडियामा त..
अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति चयनभएपछि सामाजिक सञ्जालमा भेटिए रमाईला कुरा
डोनाल्ड ट्रम्प अमरिकाका राष्ट्रपति चयन भएक छन् । तर अमेरिकामा ईलेक्शन सुरु भएदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा क्लिन्टन र ट्रम्प ट्रोल हुन थालेका थिए । राष्ट्रपति पदको लागि ..
तरकारी वाली उदायसँगै सामाजिक सञ्जालमा अरु बाली र बालाहरुको बिगबिगी
गोरखाकी कुशुम श्रेष्ठ तरकारी बोकेको एक तस्वीरले सामाजिक सञ्जालमा एकाएक भाईरल बनेपछि उनको जस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा वाला र वाली जोडेर तस्वीर सेयर गर्नेहरुको क्रम एकाए..
मैन बत्तिले कपाल काट्ने हजाम
कपाल काट्नका लागि कैचीको प्रयोग हुन्छ यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, भारतकोे गुलबर्गामा बस्ने हजामले भने मैन बत्तीको प्रयोगले कपाल काट्ने गर्छन् । उनले मैन बत्त..
तिहारबारे सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका रमाईला कुरा
सामाजिक सञ्जालमा तिहारको बारेमा लेखिएका रमाईला कुराहरु हामीले तपाईँहरुमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ । तिहारको बारेमा लेखिएका रमाईला कुराहरु पढ्नुहोस् मज्जाले हाँस्नुहोस् ।
९ रमाईला तस्वीर
हामी सबै अद्धितिय छौँ । तर कहिलेकाही कुनै वस्तुहरुसँग केही यस्ता समानता भेटिन्छन् जसलाई देखेर हामी छक्क पर्छौँ।आज हामी यस्तै केही तस्वीरहरु तपाईँमाझ प्रस्तुत गदैछौँ ।
नम्बर प्राइवेट बनाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय
प्रविधिले फड्को मारेसँगै धेरै कुरालाई सहज पनि बनाएको छ । हामी कतिले याद गरेका छौ, कहिले काहि फोन आउँदा हाम्रो फोनको स्क्रिनमा अननोन नम्बर मात्र देखिन्छ । यसो गर्न प्रविधिले नै सघाएको हो । यसो गर्न सजिलो छ । हामीले कलर आईडी ब्लक गरेर नम्बर प्राईभेट गर्न सक्छौ । यसले धेरै ठाउँमा हामीलाई सुरक्षित पनि […]
दशैँ विशेष जोक्स पढ्नुस मज्जाले हाँस्नुस
नजिकिँदै गरेको दशैँलाई विषयवस्तु बनाएर सामाजिक सञ्जालमा आएका केहि रमाईला कुराहरु आज हामी तपाईँका लागि प्रस्तुत गर्दैछौँ । पढ्नुहोस् मनमा भएको तनाव भगाउनुहोस् । चिनका बिलेनियरले कुकुरका लागि किनीदिए ८ वटा आईफोन ७ प्लस
भर्खरै मात्र एप्पलले आईफोन ७ लन्च गरेको छ । आईफोनको निकै यो मोबाईलको महंगो ब्राण्ड हो, यसलाई जो कोहीले प्रयोग गर्न गाह्रो पर्छ । तर, चीनका बिलेनियरले आफ्नो पाल्तू कुकुरको लागि ८ वटा आईफोन किनी दिएका छन् । त्यो आईफोनको मुल्य कम्तीमा पनि ६ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । ती बिलेनियरको नाम ब्याङ्ग सिकन […]
तपाईँको तनाव भुलाउन आए, कार्टुन जस्तै देखिने मान्छेहरु
प्राय बालबालिकाहरुलाई कार्टुन मन पर्छ । उनीहरु कार्टुन हेर्न र खेल्न निकै मन पराउँछन् । कार्टुनिस्टले पनि निकै मेहनत गरेर सबैलाई मन पर्ने गरि कार्टुन बनाएका हुन्छन् । काटुर्नले मानिसको सबै तनाव भगाईदिन्छ पनि भनिन्छ । त्यस्तै तपाईँको तनाव भगाउनलाई आज हामीले केहि कार्टुनहरु प्रस्तुत गर्दैछौँ । जसमा मानिसलाई हेरेर बनाईएका रमाईला का..
दाह्री जुङ्गा भएकी महिला
२३ वर्षकी हरनाम कैरको शरीरमा लोग्ने मान्छे जस्तो दाह्री जुङ्गगा पलाएको छ । त्यस्तो भएता पनि उनी आफूलाई मन पराउने कोही पक्कै आउँछ भन्नेमा आशावादी छिन् ।उनी दाह्री जुङ्गा भए पनि सामान्य महिला जस्तो महसुस गर्छिन् । तर, जहिले पनि आफ्नो स्वास्थ्यमा केही खराबी नहोस् भनेर उनी आशा गर्छिन् । एक अन्तवार्तामा उनले भनिन्, “मलाई […]
डर लाग्दो या अचम्म लाग्दो यो कस्तो आँखा ?
हामीलाई आकाशबाट कसैले हेरीरहेको छ भन्दा अनौठो लाग्छ । तर, काजकिस्तानकोे आकाश माथि हेर्दा हामीलाई कसैले हेरेको जस्तो लाग्छ । किन की त्यहाँको आकाशमा हेर्दा बादलको आकृती ठ्याक्कै कसैकौ आँखा जस्तो देखिन्छ । माथि प्रस्तुत तस्वीर एक फोटोग्राफरले खिचेका हुन् । फोटो काजकिस्तानको राजधानी अस्तानामा खिचिएको हो । यो तस्वीर खिचेका फोटोग्राफर..
अचम्म लाग्दा सेल्फी, मानिस र व्हेलको यो कस्तो मेल ?
२४ वर्षका कारपेन्टरले पखेटाको साटो पछाडि लामो भाग भएको व्हेल माछासँग सेल्फी खिचेका छन् । अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएका उनको नाम ज हो । उनले १५ मिटरको लामो ६ वटा व्हेलसँग ६ घण्टा पौडी पनि खेलेका छन् । यस बारेमा उनी भन्छन्– व्हेलले क्यामेरा देख्ना साथ पोज दिन शुरु गर्थ्यो । माछाले आफ्नो शूरमा मलाई […]
आयो साईकल कुदाउने यन्त्रमा खुट्टा राखेर पढ्ने नयाँ तरिका– यसका फाईदा छन् थरिथरिका भिडियो सहित
कक्षा कोठामा लामो समय सम्म केही नगरी बस्न गाह्रो हुन्छ । त्यही माथि अझ बालबालिकाहलाई त झनै छटपटी हुन्छ । अझ प्राय विद्यार्थीहरुलाई गणित बिषय गाह्रो लाग्ने र पढ्न मन नलाग्ने हुन्छ । यो बिषय पढ्ने बेला निकै निन्द«ा लाग्ने गर्छ । तर, संयोगले वेक काउन्टिकीको गणिातकी शिक्षिकाले यो कुराको समाधान निकालेकी छिन् । बिथेनी […]